Sir waa tan sababta rag badan u jecel yihiin gabadha bikrada ah. - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaa la sheegay in dumarkaqaarka gadaal ubuuran ay leeyihiin dareeen aad u macaan xiliga galmada. hablaha leh “back” ama bowdyaha waaweyn hadana raaraca ayaa la sheegay inay ka kacsi badanyihiin kuwa dhuudhuuban.
Raga Afrikaanka ah ayaa la xusay inay aad u jecelyihiin dumarka qaarka dambe u weyn. Raga u dhashay qaarada Afrika ayaa aad u jecel dumarka inta dambe u Weyn.
Waxaa jira daawooyin badan oo loo isticmaalo in lagu weyneeyo qeybta dambe ee hablaha. Muuqaalka hoose ayaa ku saabsan haween u dhashay dalka Congo oo aad u isticmaala kiniiniga iyo daawooyinka kale ee dabada iyo boodyaha weyneeya madaama raga wadankaasi u dhashay ay aad u jecelyihiin dumarka qaarka dambe u weyn.
Halkaan Ka Daawo Muuqaal: